Wednesday April 15, 2020 - 12:15:51 in Wararka by Liibaan Jeexoow
War rasmi ah oo kasoo baxay dowladda Kenya ayaa lagu xaqiijiyay in khasaara xooggan uu ka dhashay weerarka oo ka dhacay deegaan katirsan gobolka Wajeer ee dhulka Soomaalida NFD balse dowladda Kenya ay ula baxday "gobolka waqooyi Bari".
Nin lagu magacaabo Max'med Cabdi oo dowladda Kenya ugu magacaaban guddoomiyaha gobolka Wajeer ayaa warbaahinta u sheegay in weerarka oo ka dhacay deegaanka Khorof Harar uu sababay dhimashada 6 askari oo katirsan ciidamada booliska.
wuxuu sheegay in isagu uu ka qeyb galay aaska qaar kamid ah ciidamada lagu dilay weerarka Shabaabul Mujaahidiin ay ka fulisay Wajeer, Max'med Cabdi ayaa walaac ka muujiyay weerarada mujaahidiinta ee kusii kordhaya dhulka NFD.
Warbaahinta maxalliga ah ee Kenya ayaa sheegtay in weerar dhabagal ah oo dhacay isniintii lasoo dhaafay uu khasaara badan gaarsiiyay ciidamo katirsan booliska gobolka Wajeer xilli ay ku socdaalayeen deegaanka Khorof Harar,saraakiil katirsan maamulka gobolka ayaa madaxda booliska ku eedeeyay in ay ku guuleysan waayeen joojinta weerarada ka imaanaya Al Shabaab.
Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa sheegatay mas'uuliyadda weerarkan cudub ee lagu dilay askarta Kenyaatiga ah sida ay xalay baahisay Idaacadda Islaamiga Andalus.